Rooble oo sheegay 61 sano ka dib baahida ugu weyn ay tahay midnimo iyo wadajir | Dhacdo
Home Wararka Maanta Rooble oo sheegay 61 sano ka dib baahida ugu weyn ay tahay...
Rooble oo sheegay 61 sano ka dib baahida ugu weyn ay tahay midnimo iyo wadajir
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay 61 sano guurada ka soo wareegtay xorriyadda dalka ee 1da Luulyo iyo Midowga Koonfur iyo Waqooyi.
“Waaxan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay jooggaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda 1-da Luulyo, oo ku beegan sanad guurada 61aad ee ka soo wareegtay xorriyaddii Gobolada Koonfureed ee dalkeena, Midowgii Koonfur & Woqooyi iyo dhalashadii Qarankeena.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed ay abaal u hayaan, kuna faanayaan aabbeyaashii u soo halgamay, soona hooyay xorriyadda aan ku naallooneyno, kuwaas oo guusha ku gaaray isku duubni, wadajir, walaalnimo iyo is-jaceyl.
Rooble ayaa xusay in 61 sano ka dib, weli baahida ugu weyn ee la qabo ay tahay midnimo iyo wadajir, oo ah jidka keliya ee lagu gaari karo horumarka la hiigsanayo, kulana tartami karno dalalka iyo dadyowga adduunka.
Previous articleShabaab oo siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogtay 24 qof
Next articleDeni oo si diiran loogu soo dhaweeyay Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)